Stadia: Fepetra takiana, vidiny ary lalao hita eo amin'ny lampihazo | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | About us, Videogames
Martsa lasa teo Google dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy an'i Stadia, ny sehatra streaminganao lalao video. Na dia naseho tamin'ny fomba ofisialy tamina hetsika iray aza, namela anay lafin-javatra maro mbola tsy voavaha io orinasa io. Tsy ny antsipiriany rehetra momba azy no naseho, toy ny vidiny, lalao mifanentana na ny takiana. Tsy maintsy niandry kely izahay, nefa izao dia ofisialy.
toy ny Google dia nanambara ny antsipiriany rehetra momba an'i Stadia. Serivisy fampandehanana lalao izay tadiavin'ny orinasa amerikana handeha lavitra kokoa eo amin'ny tsena. Ny hevitra dia ny mandeha milalao amin'izay tiantsika isika na rehefa maniry izany. Mikatsaka ny hanome safidy bebe kokoa amin'ny mpampiasa izy ireo.
Betsaka ny antsipiriany momba ity sehatra ity no fantatra. Google dia lasa niaraka tamin'ny fahatsapana fikatsahana ny hanavao ny tsena miaraka aminy, saingy ity dia zavatra iray izay niteraka fisalasalana, satria noheverina fa niavonavona loatra ilay orinasa na nampanantena zavatra tsy ho vitan'izy ireo. Ny mazava dia miaraka amin'i Stadia no nahatongavan'izy ireo niady.
1 Fepetra ofisialy
2 Ny vidin'ny Google Stadia
3 Lalao azo jerena ao amin'ny Stadia
Rehefa natolotr'izy ireo tamin'ny volana martsa nahafantatra antsipiriany vitsivitsy momba an'i Stadia izahay, eo amin'ny lafiny famahana, mifanentana ary miasa. Saingy ny lisitra feno amin'ny zavatra takinao dia roa volana vao tonga. Soa ihany, efa ananantsika eo amintsika io, ary azontsika atao ny manolotra azy ankehitriny. Ireto ny fepetra ofisialy efa nambaran'ny Google:
Fanapahan-kevitra: Hatramin'ny 4K HDR amin'ny 60fps (voalohany) ary 8K ary mihoatra ny 120fps mandroso (tsy misy daty)
Project Stream: Hatramin'ny 1080p amin'ny 60 fps
CPU: CPUs x2,7 hyperthreaded x86 Custom 2 miaraka amin'ny AVXXNUMX SIMD
GPU: Custom AMD miaraka amin'ireo kaonty compute 56 ho an'ny 10,7 Teraflops miaraka amin'ny fitadidiana HBM2 tafiditra
Graphics API: Vulkan avo lenta miaraka amin'ny sary 3D
RAM: 16 GB natambatra VRAM tamin'ny RAM
Rafitra miasa: Linux
Google Data Center: Maherin'ny 7500 eran'ny Google Edge Network node
Controller: WiFi misy fifandraisana mivantana amin'ny Google Stadia
Mifanaraka amin'ny: Google Cast, PC avy amin'ny Chrome, iOS, Android, Chromecast, TV
Zava-dehibe ny olan'ny famahana. Tamin'ny voalohany dia hitantsika teo amin'ny lampihazo ilay vahaolana 4K voalaza etsy ambony, fa ny tanjon'i Google dia ny hahafahany manitatra izany amin'ny ho avy tsy ho ela. Mety tsy amin'ny 2020 vao hisy fanovana ary ny fanohanana 8K dia ampidirina amin'ny sehatra ihany koa. Na dia tsy maintsy miandry vaovao bebe kokoa avy aminao aza izahay, satria manakaiky ny daty resahina.
Ny vidin'ny Google Stadia
Raha ny azo atao dia efa fantatra tamin'ny volana martsa dia nahita serivisy famandrihana izahay. Ka tsy maintsy mandoa vola isam-bolana ny mpampiasa vao afaka miditra amin'ireo voalaza ao anatiny. Na dia tamin'ny volana martsa aza i Google dia tsy nanome fanazavana momba ny vidin'ity serivisy ity isam-bolana. Farany dia tavela amin'ity fampahalalana ity izahay, izay sombim-baovao mahaliana manokana an'ireo mpampiasa.
Amin'ny fanombohana azy dia tsy hanana afa-tsy Stadia Pro isika, izay omena $ 9,99 / volana ary mamela antsika amina vahaolana hatramin'ny 4K sy 60fps. Misaotra an'ity famandrihana ity, afaka miditra amin'ny lalao rehetra eo amin'ny lampihazo ianao, afa-tsy ireo lalao vaovao indrindra. Ireo lalao vaovao, izay tsy tafiditra amin'ny famandrihana, dia tsy maintsy mividy azy ireo misaraka isika.
Ao amin'ny 2020, Manantena i Google fa ho vonona ny kinova maimaimpoana amin'ity serivisy ity. Stadia Base ity, izay tsy handoavanay vola isam-bolana. Maimaimpoana ny fidirana aminy, na dia ho ambany aza ny vahaolana, ankoatry ny fahazoana miditra amina lalao voafetra kokoa. Saingy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy voamarina izany. Ho safidy mora azo kokoa ho an'ny mpampiasa maro io.
Etsy ankilany, natsoaka ilay antsoina hoe Edition mpanorina ny Stadia, izay karazana fonosana fanombohana. Amin'ity fonosana ity dia manana ny baiko an'ny sehatra Stadia Controller isika, izay ny vidiny dia 69 euro, Chromecast Ultra, ny lalao Destiny II, ankoatry ny famandrihana maimaim-poana mandritra ny telo volana ho an'ny kinova Pro. A Buddy Pack dia natolotra koa miditra amin'ny lalao maimaim-poana mandritra ny telo volana ny namana. Ity fonosana ity dia natomboka tamin'ny vidiny 129 euro. Afaka mamandrika izao ianao ao amin'ny magazay Google.
Lalao azo jerena ao amin'ny Stadia
Amin'ny voalohany dia haintsika izany hisy lalao 31 isan-karazany eo amin'ny lampihazo. Na dia ny hevitry ny orinasa aza dia hoe hitatra io rehefa mandeha ny fotoana. Google dia tsy nanambara ny lisitry ny lalao feno amin'izao fotoana izao, saingy efa manana ny anaram-boninahitra voalohany voamarina fa ao no hisy. Araka izany, afaka mahazo hevitra isika izao. Ireto ny lalao voamarina:
Ny kisendrasendra ataon'ny Assassin
Destiny 2 - Azo alaina miaraka amin'ny fanontana fananganana
Ghost Recon: Famirihana
Teto an-tany Kombat X
Ny Division 2
Tomb Raider: Fisondrotan'ny mpiambina ny fasana
Tomb Raider: aloky ny mpanafika fasana
Andininy iray hafa izay nantenainay ho fantatra tsy ho ela dia ny daty famoahana azy. Google dia nanamafy izany Stadia dia ho tonga amin'ny volana Novambra, saingy tsy nolazaina bebe kokoa izahay momba an'io. Ka manantena izahay fa hisy vaovao bebe kokoa amin'ity lafiny ity atsy ho atsy, fa farafaharatsiny fantatsika hoe rahoviana isika no afaka manantena izany. Hatao any amin'ny firenena 14 samihafa ny fanombohana azy, anisan'izany i Espana. Ireto no firenena voamarina:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Google dia manambara ny pitsopitsony ofisialy rehetra momba an'i Stadia
Idphoto4you dia mampihena ny haben'ny sary ho an'ny Passport online